Tsamba Yekutanga kuvaKorinde 12:1-31
Zvipo zvemweya (1-11)
Muviri mumwe chete, nhengo dzakawanda (12-31)
12 Hama, kana pari pamusoro pezvipo zvemweya,+ handidi kuti mugare musingazivi. 2 Munoziva kuti pamaiva vanhu vemamwe marudzi,* mainyengerwa muchitungamirirwa kunonamata zvidhori zvisingatauri,+ muchienda kwese kwazvaikutungamirirai. 3 Saka ndinoda kuti muzive kuti hapana munhu angatauriswe nemweya waMwari kuti: “Jesu akatukwa!” uye hapana munhu angati: “Jesu ndiShe!” kana asingatauriswi nemweya mutsvene.+ 4 Kune zvipo zvakasiyana-siyana, asi kune mweya mumwe chete;+ 5 uye kune ushumiri hwakasiyana-siyana,+ asi kuna Ishe mumwe chete; 6 uye kune mabasa akasiyana-siyana, asi Mwari mumwe chete ndiye anoaita ese muvanhu vese.+ 7 Asi mweya unooneka kushanda kwawo pane mumwe nemumwe nechinangwa chakanaka.+ 8 Nekuti mumwe anopiwa nemweya kutaura kweuchenjeri,* mumwe anopiwa nemweya mumwe chetewo kutaura kunoratidza ruzivo, 9 mumwe anopiwa kutenda+ nemweya mumwe chetewo, mumwe anopiwa zvipo zvekurapa+ nemweya iwoyo mumwe chete, 10 mumwewo anopiwa chipo chekuita mabasa esimba,+ mumwe chekuprofita, mumwe chekukwanisa kunzwisisa mashoko akafemerwa,+ mumwe chendimi dzakasiyana-siyana,*+ uye mumwe chekududzira ndimi.+ 11 Asi mweya mumwe chete iwoyo ndiwo unoita mabasa ese aya, uchipa mumwe nemumwe zvaunoda. 12 Sezvo muviri uri mumwe chete asi uine nhengo dzakawanda, uye nhengo dzese dzemuviri iwoyo, kunyange dzakawanda, dziri muviri mumwe chete,+ ndizvo zvakaitawo Kristu. 13 Nekuti tese takabhabhatidzwa nemweya mumwe chete kuti tive muviri mumwe chete, tingava vaJudha kana vaGiriki, varanda kana vanhu vakasununguka, tese takaitwa kuti tinwe mweya mumwe chete. 14 Nekuti muviri hauna nhengo imwe chete, asi une dzakawanda.+ 15 Kana tsoka ikati, “Sezvo ndisiri ruoko, handisi nhengo yemuviri,” izvozvo hazviiti kuti isava nhengo yemuviri. 16 Uye kana nzeve ikati, “Sezvo ndisiri ziso, handisi nhengo yemuviri,” izvozvo hazviiti kuti isava nhengo yemuviri. 17 Kudai muviri wese waiva ziso, kunzwa kungadai kuri kupi? Kudai wese waiva kunzwa, kunhuhwidza kungadai kuri kupi? 18 Asi Mwari akaronga nhengo imwe neimwe yemuviri sezvaaida. 19 Kudai dzese dzaiva nhengo imwe chete, muviri ungadai uri kupi? 20 Asi zvino inhengo dzakawanda, iwo muviri uri mumwe chete. 21 Ziso harigoni kuti kuruoko, “Handina basa newe,” uye musoro haugoni kuti kutsoka, “Handina basa newe.” 22 Asi nhengo dzemuviri dzinoita sedzisina simba dzine basa, 23 uye nhengo dzemuviri dzatinofunga kuti dzinokudzwa zvishoma, tinodzikomberedza nekukudzwa kukuru,+ saka nhengo dzedu dzisingaratidziki zvakanaka dzinobatwa neruremekedzo, 24 asi nhengo dzedu dzinoratidzika zvakanaka hadzina chadzinoda. Kunyange zvakadaro, Mwari akagadzira muviri wakadaro, achipa kukudzwa kukuru kunhengo yakanga isingakudzwi, 25 kuti parege kuva nekupesana mumuviri, asi kuti nhengo dzawo dzichengetane.+ 26 Kana nhengo imwe chete ikatambura, dzimwe nhengo dzese dzinotambura pamwe chete nayo;+ kana kuti kana nhengo imwe chete ikakudzwa, dzimwe nhengo dzese dzinofara pamwe chete nayo.+ 27 Zvino imi muri muviri waKristu,+ uye mumwe nemumwe wenyu inhengo yawo.+ 28 Uye Mwari akaisa vanhu vakasiyana-siyana muungano: kutanga, vaapostora;+ kechipiri, vaprofita;+ kechitatu, vadzidzisi;+ kwozotevera mabasa esimba;+ achiteverwa nezvipo zvekuporesa;+ mabasa anobatsira; kukwanisa kutungamirira;+ ndimi dzakasiyana-siyana.+ 29 Vese vaapostora here? Vese vaprofita here? Vese vadzidzisi here? Vese vanoita mabasa esimba here? 30 Vese vane zvipo zvekuporesa here? Vese vanotaura nendimi here?+ Vese vaturikiri* here?+ 31 Asi rambai muchivavarira kuwana* zvipo zvikuru.+ Asi ini ndichakuratidzai nzira inopfuura dzese.+
^ Kureva, vanhu vasingatendi.
^ Kana kuti “mashoko euchenjeri.”
^ Kana kuti “chemitauro yakasiyana-siyana.”
^ Kana kuti “vashanduri.”
^ Kana kuti “muchishingairira kutsvaga.”